မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ကွာလာလမ်ပူမြို့တွင် ရီလာ ခေါ် အရပ်ဖက် လူဝင်မှုရဲများက တရားမဝင် နိုင်ငံခြား အလုပ်သမားများကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာသည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ ဖြစ်ပါသည်။ ။ (Phtot: AFP)
မလေးရှားနိုင်ငံ အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အမှုတွေနဲ့ အဖမ်းခံထားရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား လေးထောင်ကျော်ကို သီတဂူ ဆရာတော် အရှင်ဉာဏိဿရရဲ့ အစီအစဉ်နဲ့ ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက် ဒီကနေ့ကစပြီး မြန်မာပြည်ကို ပြန်လည်ခေါ်ယူနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့ ရန်ကြီးအောင်ရပ်ကွက် တောင်တန်းသာသနာပြု (အံတော်ရှင်)ကျောင်းဝင်းအတွင်း သီတဂူ စက္ခုဒါနဆေးရုံမှာ မျက်စိဝေဒနာရှင်တွေကို လာရောက်ကုသပေးနေချိန် RFA က လျှောက်ထားရာမှာ ဆရာတော်က အခုလို မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
"တစ်ချို့က ပတ်စပို့ဗီဇာမရှိပေမယ့် တိတ်တိတ်ပုန်းလမ်းကသွားတယ်၊ တစ်ချို့က ပတ်စပို့ ဗီဇာရှိတယ်၊ အဲဒါအတွက် ပိုက်ဆံတွေစုတယ်၊ ပိုက်ဆံ ဒေါ်လာသုံးသိန်းလောက်ရတယ်၊ အဲလိုရတော့ ငါ့အဖွဲ့ကသူတွေ မလေးရှားသွားတယ်၊ ထောင်ထဲက ကလေးတွေဆွဲထုတ် Immigration ပြတ်အောင်လုပ်၊ ပတ်စပို့ မရှိဘူးလား သံရုံးက Passport ထုတ်ပေး"
တိုင်းပြည်ကို ပြန်လာမယ့် မြန်မာနိုင်ငံသား လေးထောင်ကျော်ထဲက ပထမဆုံးအသုတ်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၇၀ ဟာ ကမ္ဘောဇလေကြောင်းနဲ့ ရန်ကုန်မြို့ကို ဒီကနေ့ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ပြန်ခေါ်နိုင်ဖို့အတွက် လှူဒါန်းငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃ သိန်း ရရှိထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အားလုံး လေးထောင်ကျော်လုံးကို ပြန်ခေါ်နိုင်ဖို့ဆိုရင် နောက်ထပ်အလှူငွေ ဒေါ်လာနှစ်သိန်းလောက် လိုသေးတယ်လို့ ဆရာတော် အရှင် ဉာဏိဿရက မိန့်ပါတယ်။
THANK YOU SAYADAW.
PLEASE SAVE OUR PEOPLE.
Jul 21, 2013 01:48 AM
Jul 20, 2013 08:26 AM
Sayadaw Payar, rent the ship for all. Airplane is too expensive.
Jul 18, 2013 02:56 AM
သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဆီမှာ အလှူငွေ ကောက်ခံလိုက်ပါက အဆင်ပြေသွားနိုင်ပါသည်။ မရလျှင် RFA ဆီမှာ ကောက်ခံပါ။:P
Jul 17, 2013 09:39 PM